Imibuzo eli-101… Umthengi, ezepolitiki, uHlahlekisayo kunye ne-Starbucks | Martech Zone
Imibuzo eli-101… Umthengi, ezepolitiki, uHlahlekisayo kunye noStarbucks
NgoLwesithathu, Agasti 16, 2006 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Bendinosuku lokuphumla namhlanje (bendiludinga!). Ndifunde kwenye ibhlog ukuba uninzi lwabantu luyakhangela "101". Ke… njengesiqhelo, ndivavanya ithiyori ukubona ukuba ithini impendulo. Ndothuswa yindlela ekulula ngayo ukuza nezi zinto, zininzi izinto emhlabeni, kwezamashishini, nakweli lizwe ezindiphambanisayo. Ewe kunjalo, mhlawumbi ndim. Zive ukhululekile ukubuza imibuzo yakho okanye uphendule eyam ngokusebenzisa amagqabantshintshi.
Kutheni le nto i-Starbucks ingenzi iitshokholethi zebhari? (Ingcinga yam yentombazana eneminyaka eli-12 ubudala!)
Kutheni le nto ufuna ubuninzi bezinto ezili-15 kwiNdlela yokuBonisa? Kutheni le nto ingekho ubuncinci benqwelo eyi-1 epheleleyo? Ndingumfo ochitha yonke imali!
Kutheni le nto isaladi engxoweni ihamba kakubi ngokukhawuleza?
Kutheni kulungile ukuba ibhanki ihlawulise umntu ohluphekileyo i-30 yeedola ngetsheki e-bounce eyi- $ 1 kodwa abayi kubakhupha kwikhadi lekhredithi elinenzala ephezulu?
Kutheni le nto ibhanki ingakhupha imali yam kwangoko ngetsheki endiyibhalayo kodwa babeka usuku lwe-5 kwitsheki endiyibekayo?
Ukuba ndingafumana ikhadi le-2Gb le-SD, kutheni ungayibeki ndawonye i-500 kwaye undinike ikhadi le-1Tb endaweni yehard drive enezinto ezihambayo ezingaphumeleliyo?
Ukuba ishishini lomculo alinyolukanga, kwenzeka njani ukuba bachithe iitoni zemali kwiikreyiti, iibling, iidubs, iigrill, njl.
Ukuba ndiyakwazi ukumamela iCD, oko akuthethi ukuba ndiya kuhlala ndikwazi ukuyirekhoda?
Kutheni iivenkile ezinkulu zikhupha yonke into ezishelfini emva koko kufuneka zipakishe yonke into ibuye ezingxoweni? Ngaba akukho ndlela isebenzayo?
Kutheni le nto isigwebo sentambo sihlala sisigwebo sobomi entolongweni, kwaye isigwebo sobomi yiminyaka engama-20 ngenene?
Kutheni le nto wonke umntu esithi “Ukwahlukana kweCawe noRhulumente” xa kungekho kuMgaqo-siseko okanye kwiSibhengezo senkululeko?
Kutheni ndihlawula iifizi kwizikolo zikarhulumente zabantwana bam? Ndacinga ukuba sihlawule irhafu ngenxa yoko.
Kutheni kulungile ukuba urhulumente azame ukutshintsha imithetho yabucala ekukhuseleni inkululeko?
Kutheni kukho amaqela amabini kuphela abalulekileyo e-United States?
Kutheni le nto ukhathalelo lwempilo lungabizi kakhulu kubantu abangayisebenzisiyo?
Kutheni le nto iimpahla zeshishini labasetyhini zitshiphu ngakumbi kunesuti yamadoda?
Kutheni le nto simamela abacebisi esingabaziyo kodwa ngamanye amaxesha singabathengi bethu okanye abasebenzi xa bethetha into enye?
Kwenzeka njani ukuba abezopolitiko bavunyelwe ukuba babhale eyabo imithetho kwinto elungileyo nengalunganga?
Kwenzeka njani ukuba abezopolitiko bathabathe umhlala-phantsi phambi kwabantu abasemkhosini?
Kwenzeka njani ukuba singavoti kunyusa ezopolitiko?
Ukuba abantwana bam kufuneka bathathe i-SATs ukuze bangene ekholejini, kwenzeka njani ukuba abezopolitiko kungafuneki bathathe iimvavanyo zokungena eofisini?
Kutheni le nto amanzi endiwaphuma kwimpompo edibanisa imibhobho yam esinki, izindlu zangasese kunye neebhafu?
Kutheni le nto abantu becinga ukuba iimoto eziluhlaza ziyimpendulo, xa bezifaka kwiziseko ngamandla aveliswe kumalahle nakwinyukliya?
Kutheni le nto kulungile ukuba neerigs zeoyile kwiyadi yomntu wonke eTexas, kodwa hayi eAlaska apho kungekho mntu uhlala khona?
Kutheni sinabathunywa benkundla, amapolisa aseburhulumenteni kunye namapolisa esixeko bonke bekwindawo enye?
Ukuba eli lilizwe elikhululekileyo, kutheni abantu bengavunyelwanga ukuba benze iziyobisi?
Kutheni ukungcakaza kungekho semthethweni ngaphandle kokuba urhulumente eqhuba ilotho?
Kutheni iziqhamo zibiza kakhulu kuneetshipsi zetapile? Heck, ikhula emithini!
Kutheni le nto imigqaliselo isemthethweni kwaye iziyobisi zingekho mthethweni? Imigqaliselo are machiza.
Kutheni le nto i-United States ingakwazi ukutshintshela kwinkqubo yeetriki? Kulula ukwahlula nokuphindaphinda ngamashumi!
Kwenzeka njani ukuba iBhayibhile ingekho kuluhlu lwabathengisi beNew York Times?
Kutheni le nto uninzi lomculo wamaKristu uncanca?
Kutheni le nto iilekese kunye nepopcorn zibiza kakhulu kwindawo yemidlalo yeqonga? Bendihamba rhoqo ukuba ibinguye… kwaye mhlawumbi ndichithe imali eninzi.
Kutheni iivenkile zinemigca yokuphuma emininzi xa uninzi lwazo luvaliwe?
Kutheni ulindele ukuba abantu babhatale izinto ukuba uza kuzinika mahala? Undiqeqesha kakubi!
Kutheni iPuerto Rico ingelo lizwe kodwa iAlaska neHawaii zikhona?
Kutheni le nto imikhosi yethu kufuneka ilandele imigaqo kwaye abagrogrisi bangayenzi?
Kutheni abantwana bam benethuba elininzi kangaka lokungayi esikolweni?
Kutheni le nto imisitho emininzi yesikolo icwangciswe ngexesha lomsebenzi?
Kutheni le nto imibutho yabasebenzi yabasetyhini ingalunganga?
Kutheni wonke umntu ebonakala emangalisiwe xa ndibaxelela ukuba ndinelungelo elipheleleyo lokugcina abantwana bam?
Kutheni le nto kufuneka ndibene-inshurensi eyahlukileyo yamehlo, umzimba namazinyo? Ayizizo zonke ezonyango?
Kutheni le nto abanini khaya befuna ukuthatha inzala yabo kwiirhafu zabo kodwa irente zingakwazi ukuthatha irente? Ngaba irente ayincedi uqoqosho, nayo?
Bazizityebi njani abapolitiki?
Kutheni le nto u-Al Gore ethatha i-jet yabucala kwintetho yakhe yokuzibandakanya kushushu?
Ukuba sisemfazweni, imveliso yeoyile ingaqhubeka njani nokufumana irekhodi lenzuzo? Ngaba ayiloxabiso elo?
Kutheni singakwazi ukuyeka ugaxekile?
Ngubani othumela logaxekile apho ungavakaliyo kuwo nawaphi amagama? Kutheni bayithumela?
Kutheni le nto sibambe emkhosini kumgangatho ophakamileyo ngelixa uninzi lomkhosi ingabantu abangakwaziyo ukuya kwikholeji okanye bevela kwimfundo enzima?
Kutheni abezopolitiko bengagxothwa?
Kwenzeka njani ukuba i-Indiana itshintshe ixesha kwaye isenazo ezinye counties kwezinye?
Kutheni le nto singadibanisi amathala eencwadi oluntu kunye neelayibrari zezikolo eziphakamileyo kwaye sigcine imali eninzi?
Kwenzeka njani ukuba izaphulamthetho zekhola ezimhlophe zifumane lula xa zebe ngaphezu kwezigebenga eziqhelekileyo?
Ngaba ayithengi imarike yemasheya?
Kutheni le nto kufuneka ndiye ebharini ukuze ndifumane usuku? Ngaba akukho namnye umntu obhinqileyo oxhonywe kwimida?
Kutheni le nto ii-Starbucks kunye neMida zingenaLadies Night?
Kutheni kungekho zinkonzo zendlu ngendlu? (umzekelo: ukucoca impahla)
Kutheni ungavali umthwalo kwiinqwelomoya?
Kutheni le nto iinkokeli zonqulo zingasukumi ngakumbi xa abalandeli bazo benyelisa?
Kutheni le nto iFrance inezityalo ezininzi zenyukliya kune-United States?
Kutheni le nto singenakuthumela inkunkuma yenyukliya emajukujukwini?
Kutheni i-hemp ingekho mthethweni? Ikhula ngokukhawuleza kunemithi, yomelele, kwaye ayisiyo ichiza.
Kutheni uTommy Chong esiya ejele ngenxa yeziyobisi, kodwa uRush Limbaugh usekho kwirediyo emva kokwenza iziyobisi ngokungekho mthethweni?
Kwenzeka njani ukuba izinto zibize kangaka kwivenkile elula? Kuya kuba lula ngakumbi ukuba andihlawulanga kakhulu.
Kutheni le nto sikhwaza malunga nexabiso legesi kodwa sihlawula i-3.50 yeedola kwiGrande Mocha eStarbucks. (Mmmmm.)
Kutheni zingekho iimoto ezizodwa? Ndibona kuphela umntu omnye emotweni nganye esendleleni eya emsebenzini.
Kutheni iintatheli zikamabonakude zikhangeleka zintle kangaka?
Kutheni le nto ukutyeba kuyimeko yonyango e-United States kuphela?
Kutheni le nto unganako ubukhulu obungaphezulu kweesenti ezingama-49 ezongezelelweyo, kodwa awungekhe ubungakanani besiqingatha kwaye ugcine iisenti ezingama-49?
Ukuba ukwenza umthambo kukulungele, kutheni kungekho ndlela yakuthi ndihambe okanye ndikhwele ibhayisekile yam ndiye emsebenzini?
Kutheni kufuneka uvote kuba umntu, kodwa akakwazi ukuvota chasene umntu othile?
Kutheni le nto kunzima kangaka kuthi ukubala iivoti?
Kutheni ndingayifumani iGrande Mocha kwiiMuvi?
Kutheni le nto sihoya ngakumbi ukuba bathini abadlali xa yonke into abayenzayo bezenza ngathi bayaphila?
Kutheni le nto kufuneka ndifunde inqaku elibhalwe yindoda enesidanga sobuntatheli esithetha ngetekhnoloji endaweni yokufunda ibhlog yomntu ophila kwitekhnoloji?
Kwenzeka njani ukuba umfana ovuka kwangoko kwaye andibuze idola yonke imihla xa ndisiya emsebenzini angakwazi ukufumana umsebenzi?
Kutheni le nto imivalo ingaboneleli ngeenkonzo zeeteksi kubantu abasela kakhulu?
Njani ukuba singabinakho ukuhlela kwakhona izitshixo kwikhibhodi yokusebenza ngokuchwetheza ngokukhawuleza?
Ukuba uthuli lubulala ikhompyuter yakho, kwenzeka njani ukuba kungabikho zisefa zokutshintsha?
Kutheni le nto inkqubo yokusebenza ingabizi kakhulu kunenkqubo yeofisi?
Kwenzeka njani ukuba bangakhi umshicileli nge-hard drive kunye ne-router eyakhelweyo?
Kutheni le nto bengakhange benze iiDVD zokuqhuba iNgcaciso ePhakamileyo?
Kutheni le nto abantwana bam bengathandazi ngokuvakalayo esikolweni xa inkululeko yonqulo ililungelo lomgaqo-siseko?
Kutheni le nto abantu bengayiqondi into yokuba irhafu esezantsi izisa ingeniso engaphezulu kwirhafu?
Kutheni ezinye iinqwelomoya zingenazo iinqwelomoya ezisuka xa zonke izihlalo zigcwele endaweni yeshedyuli?
Kutheni le nto ixabiso leetikiti lenqwelo moya libiza kakhulu njengoko lisondela kwixesha lokuhamba? Kutheni kungabizi kakhulu?
Ndiza njani ukubhalisela ukuhlawulwa kwetyala kwi-Intanethi kwiindawo ezininzi, kodwa andikwazi ukuyirhoxisa kwi-Intanethi?
Kutheni le nto abathwali beeselfowuni bengawuniki ngeli xesha ubukade ungumthengi wabo?
Kutheni le nto ikhibhodi yam engenazingcingo kunye nempuku zingenakuvuselelwa?
Kutheni le nto wonke umntu kufuneka abe ne-inshurensi yemoto? Kutheni ndingabinayo nje ingxowa-mali yeinshurensi?
Kuza njani nanini na xa ndihamba ngesantya esiphezulu, wonke umntu uyahamba ngesantya… kodwa ngalo lonke ixesha ndihamba ngesantya esiphezulu, ndiyatsalelwa?
Kutheni le nto iinkampani zinganikezeli ngetyala kubasebenzi bazo?
Kwenzeka njani ukuba abafundi abaninzi beekholeji bangaze basebenze ebaleni ababambe isidanga kulo?
Kwenzeka njani ukuba abantu bangafumani isidanga 'sexesha elinikezelweyo' emsebenzini okanye kumzi mveliso?
Kutheni le nto iPETA ilalisa izilwanyana ezininzi kangaka?
Kwenzeka njani ukuba abantu balwe nebala lebhola ekhatywayo kodwa ingabi ngamyuziyam?
Kwenzeka njani ukuba abaphathi ababi benengeniso ephezulu bangagxothwa kwaye nabantu abenziwe enkonkxeni bafumane uxolo?
Kuza njani xa iinkampani zikhula, ziye zicothe?
Kwenzeka njani ukuba i-intanethi ikhule, kuya kufuneka ndifunde iilwimi ezininzi kunye neetekhnoloji endaweni yokuncinci?
Uza kanjani Yahoo!, Google, Microsoft, Monster, ADP, okanye u-Careerbuilder akakhange andinike i-1 yezigidi zeedola I-Payraise Calculator kunjalo?
[Faka umbuzo wakho apha]
Qaphela: Umbono wolu luhlu uvela ProBlogger kwaye wangena kule posi kweyakhe Iprojekthi yokuBhala kwamaQela kuLuhlu.
Ukusebenzisana kweKhompyuter, njengeNgxelo yeNgcaciso
Agasti 18, 2006 kwi-8: 26 AM
Agasti 18, 2006 ngo-12: 44 PM
Uluhlu oluhle-uphakamisa imibuzo efanelekileyo. Ngaba ungakhathazeka ukuba singaboleka isibini kubo ukuze sizilolonge kuKwenza kwakho uBuchule?
Agasti 21, 2006 kwi-2: 18 AM
14. Kutheni mabini kuphela amaqela amakhulu eUnited States?
Sinabo kuba siphumelele sithatha lonke unyulo. Abantu baseYurophu banenkqubo eyahlukileyo yonyulo lwabo, ethanda amaqela amaninzi kunye nokulawula umanyano.
28. Kutheni iziqhamo zibiza kakhulu kuneetshiphusi zeetapile? Heck, ikhula emithini!
Uninzi lweendleko zeziqhamo ezitsha zibangelwa kukonakala. Iitapile zikhula emhlabeni kwaye zitshiphu kakhulu.
36. Kutheni iPuerto Rico ingelo lizwe kodwa yiAlaska neHawaii?
Abantu basePuerto Rico bavotela ukuba bangabi ngurhulumente.
37. Kutheni le nto imikhosi yethu kufuneka ilandele imigaqo kwaye abanqolobi bengafaneleki?
Babizwa ngokuba ngabanqolobi ngokuchanekileyo kuba bengalandeli imigaqo yemfazwe yomhlaba.
43. Kutheni le nto abaninimzi bethabatha inzala yabo kwiirhafu zabo kodwa irente zingakwazi ukuthatha irente? Ngaba irente ayincedi uqoqosho, nayo?
Kukho ukutsalwa komqeshi.
45. Kutheni le nto uAl Gore ethatha ijethi yabucala kwintetho yakhe yokuzibandakanya kufudumalo lwehlabathi?
Ubukhulu becala kungenxa yokuba u-Al Gore abe sisityebi somhanahanisi.
Kutheni le nto sibambe umkhosi emkhosini ophakamileyo ngelixa uninzi lomkhosi ingabantu abangenako ukuya kwikholeji okanye bevela kwimfundo enzima?
Uninzi lwabasebenzi basemkhosini bavela kwimvelaphi ekumgangatho ophakathi.
53 Kwenzeka njani ukuba izaphuli-mthetho ezisebenza ngombala omhlophe zifumane lula xa zebe ngaphezu kwezigebenga eziqhelekileyo?
Xa oku kunjalo mhlawumbi kungenxa yokuba u-A banamagqwetha angcono, kwaye u-B akazange abeke umpu ebusweni bakhe nabani na ukufumana oko bakufunayo.
63. Kwakutheni ukuze uTommy Chong aye ejele ngenxa yeziyobisi, kodwa ke uRush Limbaugh usekho kwirediyo emva kokwenza iziyobisi ngokungekho mthethweni?
UTommy wakhutshwa e-Utah. I-Utah yimeko engqongqo kakhulu. Ngokwexabiso layo, iSalt Lake mhlawumbi sisixeko sokugqibela esikhulu eMelika apho abantu bangatshixanga iingcango zabo ebusuku.
66. Kutheni zingezizo iimoto ezihlala isihlalo esinye? Ndibona kuphela umntu omnye emotweni nganye esendleleni eya emsebenzini.
Iimoto ezihlala zodwa zibizwa ngokuba zizithuthuthu.
70. Ukuba ukuzilolonga kukulungele, kutheni kungekho ndlela yakuthi ndihambe okanye ndikhwele ibhayisekile yam ndiye emsebenzini?
Ndikhwela ibhayisekile yam ukuya emsebenzini yonke imihla. Ukuba kubalulekile kuwe ukuhamba okanye ukukhwela ibhayisekile xa usiya emsebenzini, emva koko ufumane umsebenzi kufutshane nasekhaya okanye usondele kufutshane nendawo osebenzela kuyo. Ayiloxanduva lomntu wonke ehlabathini ukwakha iindlela zokuhamba ngeenyawo kunye neendlela zebhayisekile ezikufutshane nawe.
77. Kutheni le nto ii-bha zingaboneleli ngeenkonzo zeeteksi kubantu abasela kakhulu?
Uninzi lwenyani luya kuhlawulela i-cab abathengi abanxilileyo, ngenxa yemicimbi yoxanduva olusemthethweni.
83. Kutheni abantwana bam bengathandazi ngokuvakalayo esikolweni xa inkululeko yenkolo ilungile kumgaqo-siseko?
Njengoko ndiwuqonda umthetho, abantwana bakho bakhululekile ukuba bathandaze esikolweni. Akukho mthethweni xa utitshala ejoyina okanye ebakhuthaza ukuba benze njalo.
Agasti 21, 2006 kwi-3: 44 AM
11. Kutheni le nto wonke umntu esithi â? Ukwahlulwa kweCawe noRhulumenteâ ??? xa ingekho kuMgaqo-siseko okanye kwiSibhengezo senkululeko?
Lo ngumgca oqhelekileyo osetyenziswa yi-ACLU, kwaye imithombo yeendaba ye-liberal ayinasizathu sokuyicela umngeni.
19. Kwenzeka njani ukuba abezopolitiko bathabathe umhlala-phantsi phambi kwabantu abasemkhosini?
Abantu basemkhosini banokuthatha umhlala phantsi kwangoko kwiminyaka yabo engama-37.
20. Kwenzeka njani ukuba singavoti kunyuso lwezopolitiko?
SineRiphabhlikhi apho imigaqo nemithetho yenziwa ngamagosa anyuliweyo, endaweni yedemokhrasi ethe ngqo, apho imigaqo nemithetho yenziwa ngokuthanda kwabantu ngokuthe ngqo.
22. Kutheni le nto amanzi endiwaphuma kwimpompo ediliza iisinki zam, izindlu zangasese kunye neebhafu?
Mna nawe sihlala e-Indianapolis, amanzi ethu angaphantsi komhlaba aqukethe ubuninzi belitye lekalika, elishiya ibala.
34. Kutheni iivenkile zinemigca yokuphuma emininzi xa uninzi lwazo luvaliwe?
Basebenzisa imizila eyongezelelweyo ngexesha leKrisimesi xa iivenkile zigcwele ngabathengi.
38. Kutheni abantwana bam bephuma ixesha elininzi kangaka esikolweni?
Ke amakhwenkwe anokunceda i-pa yawo ngemisebenzi yasefama.
40. Kutheni le nto imibutho yabasebenzi yabasetyhini engatshatanga ilungile?
Kutheni kungekho manyano wabasebenzi othe ngqo ok? Ngaba ndingaba nomanyano loluntu kunye nehamster yam; Ndicinga ukuba kufuneka agqitywe ngesicwangciso sam sempilo. Kuthiwani ngesithembu samaMormon abanokuba nomanyano lwaseburhulumenteni kunye nabafazi abali-14?
41. Kutheni wonke umntu ekhangeleka emangalisiwe xa ndimxelela ukuba ndinelungelo eligcweleyo lokugcina abantwana bam?
Ngokuqinisekileyo babonakala bemangalisiwe kuba amadoda phantse angaze agcinwe ngokupheleleyo abantwana babo kuqhawulo mtshato eIndiana. Ukugcinwa okupheleleyo kuhlala kunikwa kuphela utata xa umama enze ixesha elinzima lokuvalelwa.
44. Bazizityebi njani abezopolitiko?
Uninzi lwezopolitiko lufumana ubutyebi ngaphambi kokungena e-ofisini. Ukuba umntu uba sisityebi ngelixa ese-ofisini, kunokwenzeka ukuba benze ngokunganyaniseki. Umbuzo wakho kufanele ukuba ube ngu-â ?? kutheni le nto ukuba ngabantu abazizityebi kuphela abanomdla wokungenela i-ofisiâ ???? Impendulo iya kuba, kuba abantu abasebenzayo baxakekile beziphilisa ngokuzigqatsa.
46. ​​Ukuba sisemfazweni, ingaba ishishini leoyile lingaqhubeka njani nokufumana irekhodi lenzuzo? Ngaba ayililo eli xabiso?
Amaxabiso eoyile asetwa kukubonelelwa kunye nemfuno. Iinkampani zesoftware zenza ingeniso yokurekhoda nayo, ngaba lelo lixabiso lokugcoba? Ukulungiswa kwamaxabiso kukhokelela kunqongophalo, ukuthengisa kunye nentengiso yentengiso emnyama.
50. Kutheni le nto abezopolitiko bengagxothwa?
Banokuba njalo, banokukhululeka kunyulo. I-California ikhumbula unyulo, yathatha le nqanaba.
51. Kwenzeka njani ukuba i-Indiana itshintshe ixesha kwaye isenazo ezinye counties kwezinye?
Ngokwazi kwam, i-Indiana zone zone hopping inento yokwenza nokuthotywa kwengqondo okuntsonkothileyo iiHoosiers kubonakala ngathi zinako. Wonke umcimbi awunangqondo kum.
54. Ngaba asiyondawo yemarike yempahla yokungcakaza?
Ndicinga ukuba kukungcakaza, kodwa nokuwela isitalato kukungcakaza ngohlobo oluthile. Ndicinga ukuba yahlukile kwimidlalo kuba ayibophelelwanga kwezolonwabo.
Agasti 21, 2006 kwi-3: 50 AM
55. Kutheni kufuneka ndiye kwi-bar ukufumana usuku? Ngaba akukho namnye umntu wasetyhini ongatshatanga oxhoma iMida?
Ndiva abafazi abangatshatanga bebuza lo mbuzo mnye. Ndicinga ukuba ingxaki onayo ayenzi kangako apho ujonga khona, kakhulu ukuba ufuna bani. Ndingacinga ukuba udibana nabasetyhini abangatshatanga kwimida rhoqo kodwa ayingabo abo bafazi ubakhangelayo.
56. Kutheni le nto ii-Starbucks kunye neMida zinobuLadies Night?
Ndicinga ukuba amanenekazi ebusuku abhekisa kukungabikho kwentlawulo yokugubungela abasetyhini. Ukusukela ukuba i-Starbucks ayikuhlawulisi ukuba ungene, andiboni ukuba le nto inokusebenza njani. Abantu baya kwimivalo yokuqhakamshelana kuba utywala buthoba ukuthintelwa ekuhlaleni, kwaye ngenxa yokuba ukudanisa luhlobo oluthile lomdlalo ongathandekiyo.
57. Kutheni kungekho zinkonzo zininzi zendlu ngendlu? (Umzekelo: ukucoca indawo eyomileyo)
I-Indianapolis ineenkonzo zokucoca indlu ngendlu. Akukho ngaphezulu kwala mashishini kuba ayabiza kwaye ngokubanzi anenkonzo kuphela kumakhaya asemantla.
60. Kutheni iFrance inezityalo ezininzi zenyukliya kune-United States?
Ndiyakholelwa ukuba kukho izizathu ezininzi zoku. Eyona iphambili ikakhulu kukuswela amalahle aseFrance. Kumazwe aphuhlileyo, yiFrance neJapan kuphela ezingenalo inani lamalahle ukuvelisa umbane. IJapan ngandlel ithile yiAtom phobic ngezizathu ezicacileyo.
61. Kutheni singakwazi ukuhambisa inkunkuma yenyukliya emajukujukwini?
Amajukujuku asemajukujukwini ngamanye amaxesha aqhuma umoya.
62. Kutheni iHemp isemthethweni? Ikhula ngokukhawuleza kunemithi, yomelele, kwaye ayisiyo ichiza.
Bendingazi ukuba ihempe yezomzi mveliso ayikho mthethweni. Kubonakala ngathi ndiyayikhumbula impahla ye-hemp isemfashinini kwiminyaka embalwa eyadlulayo, ndicinga ukuba yonke i-hemp yemizi mveliso ayikho semthethweni yintsomi yasezidolophini.
64. Kwenzeka njani ukuba izinto zibize kangaka kwivenkile elula? Kuya kuba lula ngakumbi ukuba andibhatali kangako.
Uhlawula ngokulula kokuba ivenkile ikufutshane nekhaya lakho.
65. Kutheni sikhwaza malunga nexabiso legesi kodwa sihlawula i-3.50 yeedola kwiGrande Mocha eStarbucks. (Mmmmm.)
Ndisebenza ngebhayisekile kwaye ndithanda ukusela amanzi. Ndicinga ukuba abantu bayakhathazwa yinto yokuba ixabiso lepetroli lihamba yonke imihla kwaye abaqondi ukuba kutheni.
Epreli 2, 2007 ngo-3: 20 AM
Ndinqwenela ukuba ndibenexesha elininzi lokufunda le nto.
Jan 28, 2008 kwi-11: 40 AM
26. Ngenxa yokuba ayizizo zonke izinto ezinokufumaneka kwi-Starbucks. (okwangoku)
50. Kungenxa yokuba ziirobhothi ezingenakutshiswa.
48. Ihlokondiba lebhlog!